အနုပညာလက်ရာဆန်းတွေဆိုပါလား။ အနုပညာလက်ရာတွေဆိုရင် မြင်ရုံနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့ ကျွန်တော် မဟာမြိုင်တောအုပ်ရဲ့ မြေပုံကိုကြည့်လိုက်တော့ အတော်ကြီးမားတဲ့ တောအုပ်ကြီးဖြစ်မှန်း သိလိုက်ရတယ်။ ဒေါက်တာရဲ့ အိမ်ကြီးက သသစ်တောအုပ်ရဲ့ အလယ်မကျတကျ တောင်ကျစမ်းချောင်းတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာ။
အတော်သာယာမှာပဲ တွေးကြည့်တာနှင့်တင် ကျွန်တော်ရင်ခုန်တယ်။ ညရောက်တော့လည်း လမင်းကြီးကို နှင်းမှုန်တွေကြား ငေးရင်း နက်ဖြန်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် တောအုပ်ကြီးထဲကို။ စာတစ်စောင် ရဲ့ဖျားယောင်းမှုကို အလျှင်အမြန်လက်ခံလိုက်တာ မမှားတန်ကောင်းပါဘူးလေ။
ကားပေါ်ကိုခုန်တက် ကားနောက်ခန်းက ရေဘူးတစ်ဘူးဆွဲယူမော့ရင်း ကားအင်ဂျင်ကို စနှိုးလိုက်ပါတယ်။
တဖြေးဖြေး မြေပုံကိုကြည့်ပြီး မောင်းလာတာ အိမ်ကြီးနားလည်းရောက် အမှောင်ကလည်း ပိန်းပိတ်လို့။ ဘီးလှိမ့်ရုံ အသာဖော့မောင်းရင်း ခြံကြီးအတွင်း မောင်းဝင်သွား လိုက်တာ စဉ့်ဝင်အောက်အသာရပ်ရင်း အိမ်နှင့်ခြံအခြေအနေကို အကဲခတ်ကြည့်မိတော့ အတွင်းပိုင်းအခန်းတစ်ခုက မှန်အိမ်မီးရောင် ငယ်ကို မြင်ရပါရော။
ပြတင်းမှန်ကနေ တစ်ဆင့် ချောင်းကြည့်မိရင်း ဒီနေရာဟာ လူတစ်ယောက်တည်း နေဖို့ဆိုရင် အတော်ထူးဆန်းတဲ့ နေရာတစ်ခု အဖြစ် တွေးမိရပါတယ်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှတဲ့ အခန်းတွေနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာလေဗျာ။ ဟူး....ဖုန်ထူတဲ့ လမ်းအတိုင်း မောင်းလာတာကြာတော့ ရေငတ်တယ်။
ဒီအချိန်ရေကြည် အေးအေးလေးသောက်ရရင်ကောင်းမှာ။ ရေသောက်ဖို့အရင် ရှာရမှာပါပဲလေ။
'ကိုယ့်လိုလူမျိုးက ထူးဆန်းနေလားမသိဘူး။ ကျောင်းမပြီးခင်မှာပဲ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ဖန်တီးတဲ့အတတ်ပညာကို တိတ်တခိုးသင်ခဲ့တယ် ထုဆစ်ခဲ့တယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ အစိတ်အပိုင်းလှလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်လာတယ်။ နောက်ပိုင်း ဘ၀တလျှောက်လုံး ဒီကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေကို ဖန်တီးလာခဲ့တာ။
အဲ....မင်းပေါင်ကြားက ဖောင်းကြွလာတာကိုကြည့်ရရင် ဒီအရုပ်တွေကို ကောင်းကောင်း စိတ်ဝင်စားနေပုံပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?'
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းထဲ တနေရာရာ ခလုပ်တစ်ခုနှိပ်သံသဲ့သဲ့ကို ကျွန်တော်ကြားရသလိုပါပဲ။ တပြိုင်နက်တည်းလိုလို ကျောက်ဆစ်ရုပ် ရဲ့ နွေးထွေးလာမှုကို သတိပြုမိရပါတယ်။ စိတ်အထင်ပဲနေမှာပါဆိုပြီး ကျွန်တော် ပိုင်ပိုင့်ရဲ့ငပဲကို ဆက်ပြီးပြုစုနေမိတာ ခဏကြာတော့ ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ကိုကြားရတယ်။ ဒေါက်တာများ နောက်ဖက်မှာလာရပ်နေသလား သို့မဟုတ် တစ်ခုခုများဖြစ်သလား?
အခန်းထဲ လျှောက်ကြည့်တာ တစ်ယောက်မှမရှိတာကြောင့် ပိုင်ပိုင်ပစ္စည်းစီ နှုတ်ခမ်းသားတွေထိကပ်လိုက်ရင်း ဆက်လက်ပြုစုမိပါတယ်။ ငပဲကို လျှာတွေ နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ပြုစုရတာ အားရမိသလို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း climax ဖြစ်ချင်လာနေပြီဗျ။ ရုတ်တရက် တစ်ယောက် ယောက် ညည်းတွားသံကို နောက်တစ်ကြိမ်ကြားရပြန်တော့ ပိုင့်ပိုင့်မျက်နှာကိုမော့ကြည့်မိတာ သူကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို ထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း ဒီတစ်ခါ သူ့ကိစ္စပြီးမြောက်ရေး ဆက်ကြိုးစားပါရောလေ။
အခုကြည့်စမ်း...ရေချိုးခန်းလို့အမည်တပ်တဲ့ ငါ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ခေါမကျောက်ရုပ်တွေထက်သာတဲ့ အချိုးကျကျောက်ဆစ်ရုပ်ကို သူ့အရင်ရောက်နှင့်တဲ့ အပေါင်းအဖော်တွေကြား ထားရဦးမယ်။ ရင်အုပ်ကြွက်သားတွေက မောက်နေတာပဲ။
တင်ပါးလေးတွေက ချောမွတ်လို့။ ပေါင်ကြားက ငပဲကလည်း မမာ့တမာ။
Ko Htay said...